ဖုန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင်ငံတွင် အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းများဖြင့် အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူရန် | Shop.com.mm
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး Kaymu ဖုန်းများ Kaymu တက်ဘလက်များ Kaymu ကွန်ပြူတာများ Kaymu ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Kaymu ကင်မရာများ Kaymu ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Kaymu စားသောက်ကုန်များ Kaymu ကားပစ္စည်းများ Kaymu အားကစားပစ္စည်းများ Kaymu ကလေးများအတွက် Kaymu ဘာသာရေးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S ဖုန်းများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ (၈"အောက်) တက်ဘလက်များ (၈"နှင့်အထက်) ၀ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက် ဖုန်းကွန်ယက် iPadများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အခြားပစ္စည်းများ TOP BRANDS APPLE SAMSUNG XIAOMI ACER WAINFORD ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားပစ္စည်းများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ဖုန်းများ ဖုန်းများ ကုန်ပစ္စည်း 1129 ခုရှာတွေ့ပါသည် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ (561)ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (540)ကြိုးဖုန်းများ (27) အမှတ်တံဆိပ် Apple (102) Samsung (78) Sony (74) Melkco (67) Hello (67) Remax (63) Philips (53) KingCom (43) Konfulon (39) Huawei (36) Xiaomi (35) Singtech (27) ELECOM (26) Panasonic (24) Cherry (23) Skullcandy (23) လူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များABCEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ A1 (1) Acer (2) AGT (5) Apple (102) Asus (21) Baseus (6) Bluejoy (2) BluMagix (4) CASZH (8) Cherry (23) COLORS (17) ELECOM (26) Ferrari (2) Fineblue (1) Gamdias (1) Gear4 (5) Great Wall (4) Hello (67) Hello Kitty (1) HoCo (6) Huawei (36) ibacks (1) Ice Candy (14) iMI (5) Intex (10) J-Meister (2) Jabra (1) JVC (14) Karmart (1) KingCom (43) Konfulon (39) KWorld (5) Lenovo (21) LG (17) Logitech (5) M Phone (2) Marcus (1) Meizu (13) Melkco (67) Motorola (11) MPT (1) Nibban (1) Nokia (1) NudeAudio (9) One Plus (1) OPPO (11) Panasonic (24) Pendrive (8) Perfect 100 (22) Philips (53) PQI (2) PRODA (4) Remax (63) REMORA (1) ROCK (2) Samsung (78) SanDisk (7) Singtech (27) Skullcandy (23) Sony (74) SWITCHEAZY (1) SYH (16) T Max (2) Transcend (13) Travelling (2) USAMS (1) Vivo (11) Wicked (3) Xiaomi (35) XOLO (5) Yamaha (3) ZTE (13) Shop recommended (37) အမှတ်ပေးရန် နှင့်အထက် (439) နှင့်အထက် (455) နှင့်အထက် (456) နှင့်အထက် (459) Phone_network_support 4G (317) 3G (WCDMA) (202) 2G (GSM) (41) Operating System Android (424) iOS (77) Other (8) Symbian (1) မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 5.0 (153) 5.5 (146) 5.2 (44) 0.0 (43) 4.7 (37) 4.5 (36) 4.0 (32) 6.0 (22) 5.7 (19) 2.4 (13) 2.8 (13) 2.2 (5) 3.5 (5) 1.8 (4) 5.1 (4) 5.3 (4) 5.9 (4) 1.2 (3) 5.8 (3) 6.2 (3) 4.3 (2) 2.0 (1) 3.2 (1) 5.4 (1) 6.8 (1) Megapixels 13.0 (142) 12.0 (94) 8.0 (78) 5.0 (67) 0.0 (49) 16.0 (45) 0.3 (18) 2.0 (16) 23.0 (16) 21.5 (7) 21.0 (4) 20.7 (3) 3.0 (3) 20.0 (1) 3.2 (1) အခြားနည်းများဖြင့်ရှာရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန်: လူကြိုက်အများဆုံး လူကြိုက်အများဆုံး နောက်ဆုံးရောက်အသစ်များ အနည်းဆုံးဈေးမှစ၍ အများဆုံးဈေးမှစ၍ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး 123 …25 Ks Ks အိုကေ Samsung Galaxy S8 (4G) Dual Sim (Free Gifts Offer) – မီးခိုးရောင် Ks 1,060,000 (1) Orchid Grey ကြိုတင်မှာယူရန် Samsung Galaxy S8+ (4G) Dual Sim (Free Gifts Offer) – အနက်ရောင် Ks 1,190,000 (3) Midnight Black ကြိုတင်မှာယူရန် Apple iPhone7Plus (4G) (128GB) (ZP/A) – အနက်ရောင် Ks 1,255,000 (4) ယခု ၀ယ်ယူရန် ZTE Blade VEC (3G) Dual Sim - အမည်းရောင် Ks 175,000 (6) ယခု ၀ယ်ယူရန် XOLO Omega 5.0 (3G) Dual Sim Ks 165,000 (1) အမည်းရောင် အဖြူရောင် ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-NC80 Noise Canceling Headphones Ks 98,000 (6) … ယခု ၀ယ်ယူရန် Intex iRist Android 3G Smart Watch - အမည်းရောင် Ks 199,000 (2) ယခု ၀ယ်ယူရန် XOLO One (3G) Dual Sim Ks 128,000 အမည်းရောင် ယခု ၀ယ်ယူရန် Xiaomi MI 4S (3G) (Dual SIM) - ရွှေရောင် (RAM-3GB/ROM-64GB)-27% Ks 235,000 Ks 320,000 (7) Gold ယခု ၀ယ်ယူရန် ZTE Star 1 (3G) Single Sim - အမည်းရောင် Ks 320,000 (9) ယခု ၀ယ်ယူရန် Xiaomi Redmi Note 4X (4G) Dual Sim – ခဲရောင် (RAM-3GB/ROM-32GB)-7% Ks 210,000 Ks 225,000 (1) ယခု ၀ယ်ယူရန် XOLO Q700Club (3G) Dual Sim Ks 145,000 အဖြူရောင် ယခု ၀ယ်ယူရန် Gamdias HEPHAESTUSV2 GHS3500 Gaming Headset Ks 38,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် Intex AQUA Dream II (3G) (Dual Sim) - အဖြူရောင် Ks 160,000 (1) ယခု ၀ယ်ယူရန် Intex AQUA Star II (Dual Sim) (3G) - အဖြူရောင် Ks 115,000 (4) ယခု ၀ယ်ယူရန် XOLO A550S (3G) Dual Sim Ks 85,000 အမည်းရောင် အဖြူရောင် ယခု ၀ယ်ယူရန် Asus Zenfone Selfie (Dual Sim) (4G) - ငွေရောင် Ks 269,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် Hello X 300 (3G) Dual Sim - ရွှေရောင် ( Free Gift Watch ) Ks 47,000 (1) ယခု ၀ယ်ယူရန် Xiaomi Redmi Note 4X (4G) Dual Sim - ရွှေရောင် (RAM-3GB/ROM-32GB)-7% Ks 210,000 Ks 225,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-FR36-V-K Marshmallow Headphones (Remote) – နက်ပြာရောင် Ks 26,500 (2) … ယခု ၀ယ်ယူရန် Hello X 200 (3G) Dual Sim – အနက်ရောင် ( Free Gift Watch ) Ks 47,000 (1) ယခု ၀ယ်ယူရန် Intex AQUA Dream II (3G) (Dual Sim) - Champagne Ks 160,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-SR170-A-E Light Weight Headphones (Remote+Mic) – အနက်ရောင် Ks 45,000 (3) … ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-FR36-G-K Marshmallow Headphones (Remote) – အစိမ်းရောင် Ks 26,500 … ယခု ၀ယ်ယူရန် Asus Zenfone Selfie (Dual Sim) (4G) - အဖြူရောင် Ks 269,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် Hello Mate 1 (3G) Dual Sim ( Free Gift Water Bottle and T-Shirt ) - ရွှေရောင် Ks 118,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် KWorld Gaming Ear Headset S25 - ရွှေရောင် Ks 23,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် Hello Mate 1 (3G) Dual Sim ( Free Gift Water Bottle and T-Shirt ) - အဖြူရောင် Ks 118,000 (1) ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-FX22-W-K Clear Color Headphones – အဖြူရောင် Ks 23,500 … ယခု ၀ယ်ယူရန် Intex AQUA Q7 Pro (Dual Sim) (3G) - Champagne Ks 77,000 (2) ယခု ၀ယ်ယူရန် Intex iRist Android 3G Smart Watch - လိမ္မော်ရောင် Ks 199,000 (3) ယခု ၀ယ်ယူရန် Meizu U20 (4G) Dual Sim 16GB - အဖြူရောင် Ks 189,000 (1) ယခု ၀ယ်ယူရန် KWorld Gaming Ear Headset S13 - အနီရောင် Ks 11,500 ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-EBX5-B-K Sports Clip Headphones – အနက်ရောင် Ks 29,000 … ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-S160-V-K Light Weight Headphones(flat) – ခရမ်းရောင် Ks 27,000 … ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-EBX5-D-K Sports Clip Headphones – အ၀ါရောင် Ks 29,000 … ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-SR170-P-E Light Weight Headphones (Remote+Mic) – ပန်းရောင် Ks 45,000 (2) … ယခု ၀ယ်ယူရန် JVC HA-S160-W-K Light Weight Headphones(flat )- အဖြူရောင် Ks 27,000 … ယခု ၀ယ်ယူရန် Logitech H111 Stereo Headphone Ks 15,180 Black ယခု ၀ယ်ယူရန် Logitech H151 Stereo Headphone Ks 19,320 Black ယခု ၀ယ်ယူရန် 123 …25 အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးဖုန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ!
ယနေ့ခေတ်အခါဟာ စမတ်ဖုန်းများရဲ့ခေတ် ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေကို ဖုန်းများက အဘက်ဘက်ကနေ အကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့နဲ့စာတိုပိုဖို့တင်မကဘဲ အရေးကြီးဖိုင်များသိမ်းဆည်းဖို့၊ အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးများရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပါ ဖုန်းများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ Apple iPhone, Window ဖုန်း သို့မဟုတ် Android ဖုန်းများဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ
လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင် Android ဖုန်းများဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးအများဆုံးနဲ့ အရောင်းရဆုံးဖုန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung အပါအဝင် LG, Motorola, HTC, Huawei နဲ့ Sony
အစရှိတဲ့ ဖုန်းများအားလုံးဟာ Android စနစ်သုံး ဖုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ Androidဖုန်းများကို လူသုံးအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့ဟာ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး thirdparty apps တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ
ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Androidဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်များစွာကို အခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုင်းဖြစ်တဲ့ shop.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအိုင်ဖုန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ!
Apple ဆိုတာကတော့လူတကာ သိကြတဲ့အတိုင်း စမတ်ဖုန်းနည်းပညာလောကမှာ အားလုံးအားကျရတဲ့ နည်းပညာနဲ့ အလှပဆုံးဒီဇိုင်းများကိုတွဲဖက် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ပြီးရင် Apple ဟာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယအကြီးဆုံး အိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းကတော့ အဆင်းလည်းလှအချင်းလည်းပိုမိုပြည့်စုံလာတဲ့ iPhone7စီးရီးစ်များဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းစနစ်
များစွာပါဝင်တဲ့ အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ သင့်လိုအပ်ချက်များနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Apple နဲ့ Android ဖုန်းများကို လျှော့ဈေးပရိုမိုးရှင်းများဖြင့် Shop.com.mm မှာရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်
Shop.com.mm အွန်လိုင်းရှော့ပင်းမှာဆိုရင် အကောင်းဆုံးသော စမတ်ဖုန်းများကို အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းများနဲ့ ရောင်းချပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင် အလျဉ်းသင့်သလို လျှော့ဈေးများနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းများလည်း ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအမှတ်တံဆိပ်၊ သုံးနိုင်မယ့်ပမာဏနဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ shop.com.mm မှာအော်ဒါမှာယူလိုက်ပြီး သင့်အိမ်တံခါးဝအထိ အရောက်ပို့ဆောင်စနစ်နဲ့ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။